Booliska Maraykanka Oo WAARAN U Jaray Cristiano Ronaldo, Kiiskii KUFSIGA Oo Marxalad Kale Yeedhay Iyo Maxkamadaha Talyaaniga Oo Uu Usoo Gudbay – Cadalool.com
Booliska Maraykanka Oo WAARAN U Jaray Cristiano Ronaldo, Kiiskii KUFSIGA Oo Marxalad Kale Yeedhay Iyo Maxkamadaha Talyaaniga Oo Uu Usoo Gudbay
January 11, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Booliska waddanka Maraykanka ayaa waaran u jaray xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo oo loo haysto inuu kufsaday haweenay lagu magacaabo Mayorga oo ku nool Maraykanka.
33 jirkan shanta jeer ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or ayaa ku eedaysan in sannadkii 2009 uu hotel ku yaalla magaalada Las Vegas uu ku kufsaday Kathryn Mayorga, taas oo u gudbisay maxkamadda kiis ka dhan ah Ronaldo, isla markaana raacisay caddaymo ay hayso.
Mayorga oo kiiskeedu sii xoogaystay usbuucan kaddib markii ay haweenay kale oo lagu magacaabo ….. oo xidhiidh la lahayd Cristiano Ronaldo Jasmine Lennard ay shaacisay inay garab istaagayso Kathryn Mayorga, isla markaana ay siinayso boqollaal farriimo iyo caddaymo ah oo muujinaya hab-dhaqanka liita ee Ronaldo iyo sida ay wax walba uga suurtoobaan, ayaa waxa hadda soo baxday tallaabadii ugu horreysay ee booliska Maraykanku ka qaadayaan.
Sida uu qoray wargeyska Wall Street Journal, booliska ayaa waaran u jaray Cristiano Ronaldo, kaas oo ay u gudbiyeen maxkamad ku taalla Talyaaniga, taas oo ay ka doonayaan inay u yeedhaan, isla markaana ka qaadaan dhiigga aqoonsiga (DNA) oo lagu aqoonsan doono in qofka kursaday Mayorga uu isaga yahay iyo in kale.
Booliska oo hore u hayey waxyaabo laga helay dheecaan lagu sheegay inuu yahay midka Cristiano Ronaldo oo gaadhay maryaha Mayorga xilligii kufsiga, isla markaana shaybaadho lagu sameeyey gabadha la kufsaday naf ahaanteeda inyar kaddib xilligii dhacdada, ayaaa waxay boolisku doonayaan in DNA-da Ronaldo ay isku eegaan inuu isaga yahay iyo in kale.
Qareenka Ronaldo oo lagu magacaabo Peter S. Christiansen ayaa u sheegay idaacadda BBC in Ronaldo uu dafirsan yahay dhacdadan.
“Ronaldo mar walba wuxuu ku taagan yahay, illaa maanta, in wixii ka dhacay Las Vegas sannadkii 2009 aanay ahayn kufsi, layaabna maaha in DNA la qaado xilligan amaba ay boolisku sameeyaan codsigan oo qayb ka ah baadhista.” Sidaas waxa yidhi Peter S. Christiansen oo ah qareenka Ronaldo.
Wargeyska Der Spigen oo ah toddobaadle kasoo baxa Germany ayaa bishii October daabacay dacwadda ay gudbisay Mayorga oo uu ka helay xog dheeraad ah oo ku saabsan qaabkii uu kufsigu u dhacay iyo weliba heshiis uu Cristiano Ronaldo ku aamusiiyey dhibbanaha.
Der Spiegel waxa uu qoray in sannadkii 2010 uu Ronaldo heshiis la gaadhay Mayorga, kaas oo dhigayay in aaanay fashilinin wixii uu ku sameeyey, waxaana uu siiyey lacag dhan $375,000.
Falkan oo dhacay inyar ka hor xilligii uu Cristiano Ronaldo u wareegayey Real Madrid, ayaa waxa uu qareenkiisu ku tilmaamay in sheekada wargeysku tahay mid la buun-buuniyey oo been abuur ah, sidaas oo kalena Ronaldo ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in gebi ahaanba arrintani been tahay.
Si kastaba ha ahaatee, waarankan loo gudbiyey maxkamadda ayaan lagu sheegin xilliga Cristiano Ronaldo laga doonayo in laga qaado DNA, waxase la filayaa in si degdeg ah loo socodsiiyo kiiska.